Wararka ka imaanaya magaalada Nairobi waxay sheegayaan in dowladda Kiiniya ay dal-ku-galka Visaha u diiday Wasiir iyo xildhibaano ka tirsan barlamaanka federaalka Soomaaliya.
Garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyata ee Nairobi
Masuuliyiinta, dal-ku-galka loo diiday oo watay passpoorka diplamaasiga Soomaaliya ayaa la sheegay inay ku jiraan Wasiir kuxigeenka Tamarta iyo Biyaha Cusmaan Libaax, Xildhibaan Ilyaas Cali , Samsam Dahir oo ka tirsan Aqalka Sare barlamaanka Federaalka Soomaaliya iyo xildhibaano kale.
Dowladdaha Kiiniya iyo Soomaaliya, weli kama hadlin sababta loogu diiday xildhibaanada in galaana Magaaladda Nairobi, Hase yeeshee waxaa muddooyinkii dambe soo xumaanay xiriirka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya.
Dowlada Kiiniya ayaa hore ugu yeeratay safiirkeeduu u fadhiyay Muqdisho, sidoo kalena ka dalbatay safiirkii Soomaaliya inuu dib ugu laabto dalkaasi, Kiiniya ayaa ku eedaysay in dowladda Federaalka Soomaaliya ay bandhig xaraasha ku samaysay Ceelal shidaal oo ku yaal Xuduuda badda ee Kiiniya iyo Soomaaliya wadaagaan.
Go’aanka Kiiniya ayaa u muuqdo mid ay cadaadis siyaasadeed ku saarayso dowladda federaalka si ay u aqbalaan inay muranka badda ee u dhexeeya labada dal lagu xaliyo hab dimplamaasiyadeed , halkii ay go’aan laga gaari lahaa maxkamada Caalamiga ee Hegue.